နန်းဆိုင်နွမ်| November 17, 2012 | Hits:1
| | ဒုက္ခသည်စခန်း အားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန် ဆေးဝါးများ လိုအပ်နေကြောင်း၊ အလှူရှင်များလည်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်” အနုပညာ ပြပွဲ ကျင်းပသူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် (၂)သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်“ငြိမ်းချမ်းရေးရမှ၊ အိမ်ပြန်ရမှ လုပ်ငန်း လုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် အချိန်ပိုကြာမယ်”ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်း မြေပြို၍ လူ ၅ ဦး သေဆုံး
seng lawn November 18, 2012 - 1:53 pm I feel sorry for them and I disappointed myslef for can’t doing nothing !!! I request to Govement, Leaders, etc. of Our country.. This is one of the biggest issue of Our Country.. as they are citizin of Myanmar who lived and fought for Myanmar Independence in the History… They are the one you must taking care of….
Reply thein min han November 18, 2012 - 6:05 pm this is the consequences of having democrazy in burma … enjoy it all the people… have trust in the junta thein sein shwe man and theiralo tualo par ( people who have the same mind) su kyi and obama and hilary clinton..? all over the world burma has been believed to have democracy and be doing the real changes for democracy …
Reply ကျော်ကျော် November 18, 2012 - 10:49 pm ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့. နောက်လိုက်တွေ ဒုက္ခမရောက်တာ။